किन रोकियो जापान रोजगारी ? – जीवनशैली
किन रोकियो जापान रोजगारी ?
Home /समाचार/किन रोकियो जापान रोजगारी ?
नेपालका लागि नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाइने सम्भावना छ। जापानमा श्रम गर्न चाहने नेपालीले जापानी भाषा र सीप परीक्षा भने अनिवार्य पास गर्नुपर्नेछ। एन फोर तहको अनिवार्य भाषा पास गर्नुपर्छ। नर्सिङका लागि एन थ्री तहको भाषा चाहिन्छ। भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउनेछन्। जापानमा मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारि श्रमिक पाउँछन्। जापानले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजान लागेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका हुन्।
उमेर नपुग्दै स्कुल पठाउनु घातक